Marokero: Simba reMorocco rakaongororwa neIEA - TELES RELAY
HOME » pasi rose Marokero: Simba reMorocco rakaongororwa neIEA
Simba reMorocco nemitemo yemamiriro ekunze zvakasangana makuru makuru Mumakore achangopfuura maererano neshumo(1) rakabudisa 7 May ne International Energy Agency (IEA). State of play
Simba rinoshandiswa rinenge rinenge 90% pane zvisikwa zvemafuta
IEA yakanga yakatsaurira yekutanga in-profond report "2014 MuMorocco uye inotaurawo yake itsva bhuku kuitwa kubvira kuti nyika havi mari mu renewable simba, kupa kuwana magetsi kusvika ose ayo vokumaruwa uye kugumisa zvikuru he chinotsva map(2).
Pasinei neizvi maitiro akanaka "The IEA akati chikuru simba kudyiwa Morocco achiri rinovimba anenge 90% pamusoro Tourism: kuti 62% pamusoro mafuta, kuti 21,7% marasha uye 5% negasi maererano ichangobva Agency Data musi 2017.
Rudzi rwemitambo yenyika yehydrocarboni " kunyora nezvavo "Maererano neIEA (pasinei nemamwe mapurogiramu anovimbisa mukurudzirwa, kunyanya kunotenderedza reTendrara gas permisi), Morocco inonyanya kushandiswa pamutambo. Maroksi yemari inokonzerwa nezvinhu izvi zvakatengeswa kusvika ku69,5 bhilim dirham mu2017, kana nezve 6,3 mabhiriyoni emadhora.
IEA inoomesa kupa ngozi Marokoro, kunyanya kubva pakagadziriswa kwekugadzira mafuta ayo ekupedzisira (Samir), akaiswa mubhadhadzi mu2015. Panyaya iyi, sangano rinoshevedza hurumende yeMoroccan, pamwe chete, kuwedzera simba rayo rekuchengetedza zvigadzirwa zvepetroleum.
MuChNUMX, Maroro-shandisa simba guru raishandiswa 2017 Mtep, kana 20,5 kune rimwe nerimwe. (© Zivo yeMasimba, maererano neAIE)
32% kuwedzera kwekushandiswa kwesimba pakati pe2007 ne2017
Morocco ane vavariro kukura zvakasimba renewable simba ari magetsi kugadzirwa zvekutepfenyura: muna 2009, ikaiswa kunze kuunza 42% mugove sectors idzi 2020 ari zvachose akagadzawo vanokwanisa electric paka Moroccan. Marokoro kubva panguva yakarondedzera kuti simba rinogona kudzorerwa richafanirwa kuverenga kupfuura 52% yemagetsi emagetsi enyika iri pakatarisana ne2030. Nokuti ichi, nyika kupfeka zvakasiyana renewable sectors: mhepo (9,5% kuti magetsi kurimwa munyika 2017), hydropower (4%), solar (1,3%) kusanganisira chidimbu thermodynamic power stations, Etc.
IEA inofungidzira kusununguka kweMoroccan magetsi system (Hydroelectric plants, thermodynamic mbeu pamwe chete nekuchengetedza, kuwirirana mukati meprojekiti, nezvimwewo), zvichibvumira kukura kwakasimba kwemasimitikiti anokwanisa kuwedzerwa. Zvisinei, inorangarirwa kuti mazimbe achiripo anonyanya kutonga Moroccan magetsi mix (53,5% yezvigadzirwa mu 2017).
The International Energy Agency kukungura kuti renewable simba kukura zvinangwa Morocco vari zvino kungogumira magetsi zvekutepfenyura uye anodana hurumende kuti Chinojekesawo vavariro yayo nokuda sectors ava chokugara zvekutepfenyura uye zvifambiso.
Inokurudzirwawo kuita simba rekugadzirisa chinhu chinonyanya kukoshesa nyika nekushandiswa kwesarudzo huru yakatsaurirwa kune 2030, ine mari. Maroro-shandisa simba guru rekushandisa rinowedzera ne 32% pakati pe2007 ne2017 (inosvika 20,5 Mtep gore iroro). Kukura kwemagetsi kunoda kusimba uye kunogona kupfuurira pahuwandu hwehuwandu hwe5% pagore ne 2021 maererano neIEA.
Sechiyeuchidzo, Morocco - iyo yakagamuchirwa iyo COP22 muMarrakech kwekupedzisira 2016 - yakapiwa pasi pezvibvumirano zveParis kuti kuderedze hupfumi hwayo hwemhepo inokonzerwa ne42% ne2030 yakaenzaniswa nechiitiko " bhizinesi-se-kazhinji Panguva ino, pasi pe " kugamuchira rubatsiro rwakanyanya kubva kune dzimwe nyika (Pasina tsigiro iri kunze, chinangwa chinongopera kuderedzwa kwe17% yezvinobudisa mumhepo 2030)(3).
MuC2017, kubudiswa kwemagetsi kweMorocco kwakavakirwa kune zvinodarika 80% pane zvisikwa zvemafuta. (© Zivo yeMasimba, maererano neAIE)
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.connaissancedesenergies.org/la-situation-energetique-du-maroc-decryptee-par-laie-190516
Mopti: 4 Masoja eMaliya akaurayiwa muvandiri muDiakera (Diafarabé)